Cloud Computing: Ny zava-drehetra amin'ny serivisy - XaaS | Avy amin'ny Linux
Ny rindrambaiko hatramin'ny namoronana azy dia mizara voajanahary amin'ny sokajy 3 izay ny: Rafitra, Fandaharana ary Fampiharana. Ary ity farany kosa dia niova tsikelikely avy amin'ny Applications: Native, Web, Hybrid, mankany amin'ny Progressive ary aparitaka.
Miaraka amin'ny Nifindra monina tany amin'ny Cloud (Internet) ny fampiharana Tsy eo intsony io manamafy foto-kevitra na maodely momba ny asa sy ny orinasa fantatra amin'ny hoe "Ny zava-drehetra ho serivisy", fantatra amin'ny anarany sy fanafohezana amin'ny teny anglisy amin'ny ankapobeny toy ny: Izay rehetra atao amin'ny serivisy na amin'ny serivisy (XaaS).
1 Fomba fijery ankehitriny
1.2 Convergence sy Hyperconvergence
2 Hevitra mifandraika
2.2 Rindrambaiko ho serivisy (SaaS, lozisialy ho serivisy)
2.3 Sehatra ho serivisy (PaaS)
2.4 Fotodrafitrasa ho serivisy (IaaS)
Fomba fijery ankehitriny
XaaS no paradigma vaovao ho an'ny tsenan'ny computing cloud ankehitriny ary ny firoboroboan'ny firoboroboany mandritra ny taona ho avy dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny sehatra Telecommunications, Big Data and Internet of Things (IoT).
toy ny XaaS dia hevitra ara-teknolojia izay misy hevitra maro mifandraika amin'ny fanavaozana ny haitao eo amin'ny rahona, izay mamorona fomba vaovao mamorona sy manome lanja ireo fikambanana, na ho an'ny daholobe na ho an'ny tsy miankina.
Convergence sy Hyperconvergence
Ao aminy manokana, XaaS dia manondro ireo serivisy IT marobe sy mitombo izay idiran'ny fikambanana amin'izao fotoana izao noho ny Internet ary ireo fiovana lehibe entin'izy ireo ho azy ireo, ny maodelin'ny orinasa ary ny fiovana mankany amin'ny fifangaroan-kevitra.
Fahatakarana toy ny Fifanekena IT ny firaisana na fampifangaroana hevitra IT na teknolojia IT, indrindra ny Computing Center Infrastructure (Datacenters), toy ny: Processing, Storage, Networks, Telecommunications, amin'ny sehatra ara-batana (Chassis, Machine) na Hardware.
Ary ahoana Fifaneraserana IT amin'ny fotodrafitrasa voafaritra rindrambaiko izay manasaraka ny asan'ny fotodrafitrasa HW sy ny rafitra ary mampivadika azy ireo amin'ny haavon'ny Hypervisor ao anaty sakana iray.
Ity paradigma vaovao an'ny «as-a-service» (as-a-service) ity dia maodely fandraharahana, izay ny firafitry ny Organisations sy ny fiasan'izy ireo dia heverina ho toy ny sehatry ny serivisy. Arakaraka ny maha-be fanakianana ny dingana ao anatin'ny rafitra iray, ny fifindra-monina, no mahasarotra ny olana atrehin'izany. Ary eo no miavaka ny maodely XaaS.
Ny fampiasana ny maodelin'ny XaaS amin'ny Organisations dia manana tombony amin'ny fanamorana ny famahana ny olana amin'ny sehatry ny IT, raha mandroso amin'ny toe-javatra izay ahafahan'izy ireo mitombo sy mivelatra, mamela anao hifindra haingana amin'ny tsena iray (niche) mankany amin'ny iray hafa ary amin'ny maodelin'ny orinasa iray mankany amin'ny iray hafa.
Etsy ankilany, ny maodely XaaS dia mamela ny scaling haingana manoloana ny fangatahana fangatahana tsy ampoizina, manafaka ireo loharanom-pitantanana, ahafahan'ny Organisations manokan-tena tanteraka amin'ny orinasa sy ny fitomboany, fa tsy ny fotodrafitrasa.
XaaS dia maodely fandraharahana hatraiza hatraiza, manome fanatontoloana amin'ny alàlan'ny rahona. Matanjaka amin'ny teboka mitsikera ny fotodrafitrasa informatika izay mahatonga azy tsy ho vato misakana amin'ny fitomboana sy ny fanovana orinasa.
Misy hevitra, maodely na teknolojia marobe mifandraika amin'ny paradigma an'ny "as-a-service" (as-a-service). Izany hoe, na dia ny XaaS malaza indrindra aza matetika dia: lozisialy ho serivisy (SaaS, lozisialy ho serivisy), sehatra ho serivisy (PaaS, sehatra ho serivisy) ary fotodrafitrasa ho serivisy (IaaS, fotodrafitrasa ho serivisy), isaky ny misy karazana karazany misimisy, izay ahitantsika ireto manaraka ireto:
Fitaovana toy ny serivisy (HaaS, Hardware ho serivisy)
Tahiry ho serivisy (SaaS)
Database toy ny serivisy (DBaaS, DataBase ho serivisy)
Famerenana ny voina ho serivisy (DRaaS)
Serasera ho serivisy (CaaS)
Tambajotra ho serivisy (NaaS)
Fanaraha-maso ho serivisy (MaaS)
Kaontenera ho serivisy (CaaS, Kaontenera ho serivisy)
Miasa amin'ny serivisy (FaaS, Miasa amin'ny serivisy)
Fiarovana amin'ny maha serivisy anao (SECaaS, Security ho Service)
Ny hafa tsy dia fantatra loatra na tsy ampiharina dia matetika:
Fitantanana amin'ny serivisy (MaaS)
Orinasa toy ny serivisy (BaaS, Orinasa toy ny serivisy)
Ary amin'ny endrika famintinana, ny foto-kevitra na modely XaaS lehibe 3 dia azo faritana toy ny:
Rindrambaiko ho serivisy (SaaS, lozisialy ho serivisy)
Rehefa manome fampiharana mandeha amin'ny rahona ny mpamatsy ary izany dia azon'ny client alefa amin'ny alàlan'ny fitaovana isan-karazany, miaraka amina interface maivana (toy ny tranokala) na amin'ny alàlan'ny interface (API). Izany hoe, izy no mitantana ny rindranasa sy ny loharanon-karena hafa (Network, Servers, Operating Systems, Storage, ankoatry ny hafa).
Sehatra ho serivisy (PaaS, Sehatra ho serivisy)
Rehefa manome ny fahafaha-manaparitaka ny fampiharana azy manokana na an'ny mpanjifany amin'ny fotodrafitrasa rahona ny mpamatsy, raha mitandrina ny mpanjifa mifehy azy ireo. Ny mpamatsy dia miandraikitra ny fitantanana ny loharanom-bola rehetra.
Fotodrafitrasa ho serivisy (IaaS)
Rehefa manome fikirakirana, fitehirizana, tambajotra ary loharanom-pahalalana hafa azo tsapain-tanana ny mpamatsy izay ahafahan'ny mpanjifa mampihatra sy mampandeha rafi-piasa, fitehirizana ary fampiharana.
Amin'izany rehetra izany dia mazava amintsika fa «Ny zava-drehetra ho serivisy» dia miteraka fanovana (fifindra-monina) ny asan'ny IT an'ny Organisation mankany amin'ny rahona (Internet) amin'ny alàlan'ny sehatra iaraha-miasa, azo zahana na aiza na aiza, miaraka amin'ny fihenan'ny vidin'ny asa sy ny fanamorana ny fizotrany.
Ary ho fanampin'izay, ny maodely XaaS miorina indrindra amin'ny IaaS, PaaS ary SaaS dia manitatra, manitatra ireo karazan-singa rehetra azo atolotra ho serivisy. XaaS dia manitatra ny tombotsoan'ny Cloud Computing amin'ny faritra na fizotran'ny Organisations, manohana tanjona kendrena amin'ny asa isan-karazany, manomboka amin'ny Human Resources, hatrany amin'ny Security Tradialy na Information.
Raha tsorina XaaS dia mahatonga azy io tsy azo ihodivirana fa ny serivisy IT rehetra dia hiafara amin'ny fanolorana azy ao amin'ny rahona, izay hiafara amin'ny fanamafisana azy io bebe kokoa rehefa mandeha ny fotoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » XaaS: Cloud Computing - Ny zava-drehetra ho serivisy